Ukunyatheliswa kokuqala - ama-Geofumadas
Uma kuqhathaniswa nezinguqulo ze-ArcMap Legacy, i-ArcGIS Pro iyisicelo esivumelanako futhi esisebenzisanayo, yenza lula izinqubo, izibonisi, futhi ivumelanise kumsebenzisi ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo ngokwezifiso; ungakhetha isihloko, isakhiwo sezinyathelo, izandiso, futhi akufanele ukhathazeke ngokukhipha ngaphambilini uma kukhona isibuyekezo esisha. Yini enye esingayilindela ...
Ukuhlelwa komsindo nevidiyo nge-Screencast-o-matic kanye ne-Audacity.
Uma ufuna ukukhombisa ithuluzi noma inqubo, ochwepheshe abaningi basebenzisa ama-video wokufundisa kusuka kumakhasi akhethekile, yingakho labo abazinikezela ekukhiqizeni okuqukethwe kwe-multimedia kumele bahlole izici ezingathinta izinsiza ngesikhathi sokudala. , njengomsindo. Kulo ...
Ukufundisa CAD / GIS, kokuqala
Uhlelo oluhle lokugcina isikrini bese uhlela ividiyo
Kule nkathi entsha ye-2.0, ubuchwepheshe buguqukile kakhulu, kakhulu, ukuze bakwazi ukufinyelela ezindaweni ezazingenakwenzeka ngaphambili. Njengamanje izigidi zezifundo zenziwe ngezihloko eziningi futhi zihloselwe kuzo zonke izinhlobo zezilaleli, ngokuhamba kwesikhathi sekube isidingo sokuba namathuluzi alondoloza izenzo esizikhiqizayo ...
Faka imephu ku-Excel - thola izixhumanisi zendawo - U-UTM uqondisa
Imephu.XL uhlelo lokusebenza elikuvumela ukuba ufake ibalazwe ngaphakathi kwe-Excel bese uthola izixhumanisi ngqo kusuka ebalazweni. Ungabonisa futhi uhlu lwamaphuzu angama-latitudes nama-longitudes ebalazweni. Indlela yokufaka imephu ku-Excel Uma uhlelo lufakiwe, lengezwe njengethebhu eyengeziwe ebizwa ngokuthi "Imephu", nemisebenzi ye ...
I-TopView - Isicelo sokuhlola nokuhlola
Nsuku zonke sibona ukuthi izidingo zethu ezishintshayo nokuthi ngenxa yezizathu ezihlukahlukene siyaphoqeleka ukuba ukuthenga PC ezahlukene isofthiwe, GPS kanye Ubude Zokusebenzela, ngasinye uhlelo ehlukene, isidingo inqubo yokufunda kusistimu ngamunye, futhi lapho sinezinto ezingahambisani nedatha ngokuvamile ukuthi akunakwenzeka ukudlulisa ...
I-Geofumadas ikumema ukuthi ukwazi okushicilelwe kuyi-intanethi kwi-IGN portal yaseSpain!
Esikhathini esidlule: Ukunakekela konke okuhlobene ne-geography nokuthuthukiswa kwebalazwe ezweni ngalinye kuye kwadala ukudalwa kwama-ejensi kahulumeni aphethe lo msebenzi obalulekile. Kwezinye izimo kuncike kuMnyango Wezokuvikela noma omunye kuye ngokuthi ishadi langaphakathi lenhlangano yezwe ngalinye, lolu hlobo ...
Cartografia, Inthanethi kanye Amabhulogi, kokuqala
Simple GIS Software: GIS by $ 25 iklayenti futhi Web kuseva $ 100
Namuhla siphila izigcawu ezithakazelisayo, isiphi isofthiwe samahhala kanye nokuhlanganyela okuyimfihlo okufaka isandla embonini ngezimo zokuncintisana ngokulinganisela. Kungenzeka ukuthi indaba ye-geospatial ingenye yamasimu lapho izixazululo ezivulekile zomsuka ziqinile njengezixazululo zelayisense ezingekho mahhala; Nokho, ...
Okufakiwe, Geospatial - GIS, kokuqala
Microstation Connect Edition - Kuyodingeka ukuzivumelanisa interface entsha
In umagazini Connect ka Microstation, olwaqalwa 2015 futhi 2016 igcwaliswe kulo nyaka, Microstation esibonakalayo siguqule bendabuko ohlangothini ibha amamenyu kanye nohlobo aphakeme-Microsoft Office imenyu. Siyazi ukuthi lolu shintsho kuletha umthelela walo umsebenzisi owayazi lapho ukuthola izinkinobho, njengoba kwenzeka abasebenzisi ...
muva Allware inkampani ltd umkhankaso Framework I-Web ngokuthi eZhing (www.ezhing.com), ngazo ungakwazi 4 izinyathelo kokuba siqu imephu yakho eyimfihlo izinkomba kanye IoT (Izinzwa, iBeacons, Alamas, njll) zonke ngesikhathi sangempela. 1.- Dala Ukwakheka (izindawo, izinto, izibalo) isakhiwo -> Gcina Biza igama layo 2.- le Propierties izinto -> Gcina, 3.- udalula ...
Ukuguqula idatha yendawo ku-intanethi!
MyGeodata kuyinto emangalisayo service inthanethi ngawo kungenzeka okuguqula idatha ye-geospatial nge ezahlukene CAD, GIS futhi raster ifomethi, ehlukile projector inkomba uhlelo. Ukuze wenze lokhu, vele ulayishe ifayela, noma ukhombise i-URL lapho igcinwa khona. Amafayela angalayishwa ngamunye, noma ...
I-JOSM - I-CAD ukuhlela idatha ku-OpenStreetMap
I-OpenStreetMap (OSM) mhlawumbe esinye sezibonelo ezinhle zendlela ulwazi olunikezwa ngayo ngokubambisana lungakha imodeli emisha yolwazi lwe-cartographic. Ngokufanayo ne-Wikipedia, lo mkhankaso waba obaluleke kangangokuthi namuhla nge-geoportals kungcono ukubeka lokhu ungqimba ngemuva ukuze ukhathazeke ngokubuyekeza ulwazi lwakho siqu kuzici ...
CAST - A isofthiwe mahhala ukuhlaziywa zobugebengu
Ukutholakala kwamaphethini wezindawo zobugebengu nezigameko zobugebengu kuyisihloko sentshisekelo kunoma yimuphi uMbuso noma uhulumeni wasekhaya. I-CAST yigama lesofthiwe yamahhala, iziqalo ze-Crime Analytics ye-Space-Time, eyasungulwa ku-2013 njengesixazululo somthombo ovulekile wokuhlaziywa kwe-actuarial, ngamaphethini ...
Thola submeter ukunemba kusukela-iPad / iPhone
I GPS idivayisi ye-iOS efana iPad noma iPhone umamukeli ithola accuracies ngokulandelana esinye isiphequluli: 2 futhi 3 phakathi kwamamitha. Ngaphandle GIS Kit, ayebone nezinye ezingenziwa ukuze uthuthukise ukunemba kwayo, Nokho sibonga kokukhuluma umngane, kuyathakazelisa sibheke lokhu ...
I-MDT, Isixazululo esiphelele sokuPhrojekthi nokuPhenya
With kuka abasebenzisi 15,000 50 emazweni futhi iyatholakala ngeSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi kanye isiPutukezi phakathi kwezinye izilimi, MDT ingenye kakhulu baziswa yizinkampani waziphatha izinhlelo zokusebenza geoengineering isikhulumi lweSpanishi. APLITOP has iphothifoliyo yayo imindeni emine kwezicelo: amaphrojekthi ohlola, izicelo emkhakheni nge esiteshini Imininingwane ...
AutoCAD Yiqiniso umbono wami wokuqala
I-AutoCAD-AutoDesk, Okufakiwe, Ubunginiyela, kokuqala, topografia
BlogPad - WordPress Umhleli iPad
Ekugcineni ngithole umhleli enginelisekile ku-iPad. Naphezu kokuba yi-WordPress ipulatifomu yokubloga ephezulu, lapho kukhona khona izifanekiso kanye nama-plugin aphezulu, ubunzima bokuthola umhleli omuhle bekulokhu kuyinkinga. Kudeskithophu engisakwazi ukuthola okuthile. Ngazama i-BlogPress, i-WordPress ye-iOS, i-Blog Docs, ...
Apple - Mac, Inthanethi kanye Amabhulogi, kokuqala